“Ijaarsi sirna dimokraasii nu barbaachisa; dirqamas” -Doktar Abiyyi Ahmad
“Ijaarsi sirna dimokraasii nu barbaachisa; dirqamas” -Doktar Abiyyi Ahmad Featured
Doktar Abiyyi Ahmad wayita haasaa taasisanitti (Suurri Haddush Abrhaatiin)
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Wiixata darbe Doktar Abiyyi Ahmad Ministira Muummee RFDI taasisuun erga moggaasee booda daqiiqaa 35f haasaa taasisaniiru. Haasaa isaanii keessatti rakkoolee biyyattii mudate furuuf ijaarsi sirna dimokiraasii nu barbaachisa; dirqamas jedhanii, hojiitti hiikuuf ammoo waldhaggeeffachuun murteessaa akka ta’e ibsaniiru.
Kunimmoo Itoophiyaan erga sirna kanaan buluu eegaltee waggoota 27 lakkoofsistus hanga barbaadame deemamuu dhabuutiin rakkooleen bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa daran akka hundee gadi fageeffatan haasaasaanii keessatti eeraniiru. Kana furuuf ammoo sirna biraa hojiirra oolchuu osoo hintaane qajeelfamoota dimokiraasii qabatamaan hojiitti geeddaruun dirqamadha jedhanii, qaamoleen martuu tumsuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.
Akka haasaa Doktar Abiyyiitti, yaadrimeen dimokiraasii Itoophiyaanotaaf haaraa miti. Yaadrimeen dimokiraasii hawaasa idil-addunyaa hedduu biratti osoo hinbeekamiin dura Sirna Gadaa Oromootiin akkaa walbulchine addunyaaf fakkeenya ta’uun jiraachaa turreerra. Ammas ijaarsa sirna dimokiraasii mirkaneessuun dhimma jiraachuufi jiraachuu dhabuu biyyattiiti, jedhu. Bilisummaan ammoo mootummaatiin badhaasa ummataaf kennamu osoo hintaane kennaa uumamaa ulfina namummaarraa burqu akka ta’es eeran.
Kanarraa kan ka’e heerri biyyattii bilisummaaf beekamtii kan kenne waan ta’eef, sirnaan hojiirra oolchuu barbaachisaa jedhu. Keessumaa ammoo mirgoota namummaafi dimokiraasii kanneen akka yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirgi walgahuufi gurmaa’uu akkuma heera keessatti ibsamanii jiraniin hojiirra oluu akka qaban hubachiisan. Kana waliinis lammiileen biyyattii martuu adeemsa dimokiraatawaa ta’een caasaalee bulchiinsa mootummaa hundaa keessatti hirmaachuuf mirgisaanii guutummaatti eegamuu akka qabus jala muruun ibsan.
“Ijaarsi sirna dimokiraasii keessumaa waldhaggeeffachuu gaafata. Ummatni mootummaasaa qeequuf, filachuufis ta’e gaafachuuf mirga guutuu qaba. Mootummaan tajaajilaa ummataati; sababiinsaa qajeelfamni keenya olaantummaa ummataa mirkaneessuu waan ta’eefi” jechuun ummata dhaggeeffachuun hundaa ol murteessaa ta’uu dubbatan. Kunimmoo sirna bulchiinsa dimokiraasii keessatti qajeelfamni jalqabaafi dhumaa waldhaggeeffachuun garaagarummaa yaadaa keessummeessuu danda’uu mul’isa jechuudha.
“Biyyi Itoophiyaa kan hunda keenyaa waan taateef, qabsoo ijaarsa sirna dimokiraasii sagaleen hundaa itti dhagahamuufi hirmaachisu itti fufiinsaan kan ijaaran ta’uus eeran.
Bulchiinsa sirna dimokiraasii keessattis olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaadha jedhanii, kana waliinis haqummaa mirkaneessuunis barbaachisaa akka ta’e ibsu. Kana jechuun ammoo seeruma baasuu qofaa osoo hintaane sirna haqummaaf dhaabate, akkasumas haqummaa of keessaa qabu ijaaruudha. Kana gochuufis dhaabbilee dimokiraasii dhiibbaa tokko malee of danda’anii hojjetan hundeessuun tarkaanfii duraa ta’uu kan mirkaneessan yoo ta’u, barbaachisaa ta’ee yoo argames imaammatoota, qajeelfamootaafi tarsiimowwan damichaa kan fooyya’an ta’uu addeessaniiru.
Kana malees, Doktar Abiyyi haasaa isaanii keessatti nageenyaafi tokkummaa biyyattii yeroo kamirrayyuu caalaa eegsisuun alatti hariiroo biyya alaa waliin qabaachuu qabanirrattis bal’inaan kallattii hoggansasaanii argisiisaniiru. Haala kanaan, Itoophiyaan ofirra darbitee biyyoota Afrikaafi addunyaaf gahee olaanaa kan qabdu waan taateef, imaammata fayyadamummaafi walqixxummaa waliiniirratti hundaa’e cimsuun kan itti fufan ta’uu eeran. Lammiilee Afrikaa waliin nageenyaan jiraachuuf kan hojjetan ta’uu beeksisanii, keessumaa ammoo walitti bu’iinsa Eertiraa baroota hedduu lakkoofsise furuuf kutannoon kan hojjetan ta’uu ibsaniiru.
Lammiileen Eertiraafi Itoophiyaa faayidaatiin kan walitti hidhaman qofaa osoo hintaane dhiigan kan walitti firoomanidha kan jedhan Doktar Abiyyi, garaagarummaa duraan turan mariitiin hiikuuf qophaa’oo ta’uusaanii mirkaneessaniiru. Mootummaan Eertiraas ejjennoo walfakkaatu qabachuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru.
Dhumarrattis, yeroo dhiyoo as komiiwwan ummata Itoophiyaa haalaan mufachiisan keessaa malaammaltummaan tokko ta’uusaa dubbatanii, gocha kana dhaabbilee farra malaammaltummaa hundeessuu qofaan furamuu akka hindandeenye hubachiisaniiru. Kanaaf, tokko yoo hojjetu tokko ammoo kan saamu akka hintaaneef qabsoo hadhaawaa gochuutiin waliin ittisuun murteessaadha jedhu.
Walumaagalatti, haasaa Doktar Abiyyi si’a jalqabaaf taasisan keessumaa siyaasa biyyattii okkolaa ture kan sirreessudha jechuun miseensotni mana marichaa tokko tokko yaadasaanii kennaniiru. Guutummaattis hamilee kennuunsaanis kanuma kan mul’isudha. Ijaarsi sirna dimokiraasii ammoo hirmaannaa hundaa kan gaafatu waan ta’eef, tumsas gaafataniiru.
Torban kana/This_Week 11806
Torban darbe/This_Month 91643
Guyyaa mara/All_Days 1603601